Sawir: Talibaan Oo 137 Askari American ah ku dishay Wadanka Afghanistan.
Dowladda Sacuudiga oo qorshaynaysa in ay xukun daldalaad ah ku fuliso Afar Wadaad.
Weerar lagu dilay askar katirsan Nabad Sugidda oo ka dhacay degmada Dharkeynleey.
Dhageyso: Xalqada 17aad Ee Barnaamijka Halgankii Daraawiishta Sayid Max'med Cabdulle Xasan.
Dhageyso: Sheekh Abuu Muscab Oo ka hadlay Qaraxii lagu hoobtay ee ka dhacay Hareeraha Madaxtooyada.
Monday March 04, 2019 - 16:23:34 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xarakada Islaamiga Taliban ayaa soo gaba gabaysay howlgal maalmo qaatay oo dagaalyahanadeedu ay ka fuliyeen saldhig ciidamo Mareykan iyo Afghaanistaaniyiin ah ay ku lahaayeen galbeedk wadankaasi.
Howlgalka oo ahaa mid ay fuliyeen dagaalyahanno Naftood hurayaal ah wuxuu jimcihii lasoo dhaafay ka bilaawday saldhigga ciidanka cirka ee Shooraab kaasi oo dhaca gobolka Helmand ee Koonfurta wadanka Afghanistan.
Dagaalyahannada weerarka fuliyay oo ahaa sagaal ayaa ku guuleystay in ay dilaan boqolaal askari oo isugu jira Mareykan iyo kuwa xukuumadda dabadhilifka Afghanistan, tira koob rasmi ah oo kasoo baxay Talibaan ayay kusoo bandhigtay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay howlgalkaas dhiigga faraha badan ku daatay.
Dhimashada ciidamada Mareykanka ee weeraray saldhigga Shooraab ayaa lagu sheegay 137 askari iyo 260 askari oo katirsan ciidamada dowladda dabadhilifka ee fadhigeedu yahay magaalada Kaabuul.
Dhaawaca ciidamada Mareykanka kasoo gaaray weerarka ayaa gaaraya 19 askari halka ciidamada xukuumadda kaabuul laga dhaawacay ay gaarayaan 73 askari, warbixinta Taliban kasoo baxday waxaa lagu xaqiijiyay in tobanaan gaadiid gaashaaman ah iyo saanado hub ah ay dagaalyahanadda istish-haadiyiinta ah ku burburiyeen weerarka.
Imaarada Islaamiga ah ayaa gacanna ku edbinaysa soo duulayaasha Mareykanka ee Afghanistan ku sugan gacanna wada xaajoodyo siyaasadeed uga jirta magaalada Dooxa ee wadanka Qadar wadahadalladaas oo ujeedka laga leeyahay ay tahay qaabka ay ciidamada Mareykanka uga bixi lahaayeen wadanka.
Hoos Ka Daawo Sawir ay ku cadyihiin tirakoobka khasaaraha ka dhashay weerarka
Dhageyso: Birqda Roobka oo 180 neef Ari ah ku dishay gobolka Galguduud
4 Askari Kenyaan ah oo ku dhintay qarax ka dhacay duleedka degmada Wajeer.
Muslimiinta Wadanka Arjantiin oo Bisha Ramadaan soomaya 9 Sacadood oo qura [Dhageyso Warbixin].
Sidee usoomaan Muslimiinta ku dhaqanka Wadanka Hindiya ? [Dhageyso Warbixin].
Askari Muqdisho ku Rasaaseeyay Gaari ay la socdeen Arday iyo Dhaawacyo ka dhashay.
Sidee usoomaan Muslimiinta ku dhaqanka Wadanka Suuriya ? [Dhageyso Warbixin].
Weeraro askari lagu dilay oo ka dhacay deegaannada Bariire iyo Warmaxan Ee Sh/Hoose.